Kenya oo ceeb dhexda ka taagan kadib damacii raqiiska ahaa ee Zakariye iyo Guul usoo hoyatay ciidanka dalkeena - iftineducation.com
iftineducation.com – Dowladda Kenya ayaa ceeb dhexda ka taagan kadib markii ay ku fashilantay damaceedii ahaa inay la wareegto madaxii hore ee sirdoonka Al-Shabaab iyo ku xigeenkii Godane.
Ciidamada Kenya, ayaa shalay isku gadaamay gurigii lagu hayey Xakariye Ismaaciil Xersi ee gobolka Gedo, kadib markii uu isku dhiibay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Isku-dayga Kenya waxa uu ahaa mid dhaawac ku ah madax banaanida Soomaaliya, hase yeeshee laguma guuleysan.
Qorshaha Kenya waxa uu ahaa in la wareegista gacan ku haynta Zakariye ay ku dhaydo dhaawacyada tirada badan ee dalkaas kasoo gaaray kooxda Al-Shabaab, kadib weeraro boqolaal qof looga dilay oo kooxdaas ay ka fulisay Kenya.
Xukuumadda Nairobi waxa ay dooneysay inay Zakariye ay u adeegsato inay ku dejiso shacabka Kenya ee ka carreysan waxqabad la’aanta dowladda Kenyatta oo aan wax fikrad ah ka haysan sidii ay isaga dhicin lahayd Al-Shabaab.
Kenya waxa ay rabtay inay xaddo guul usoo hoyatay dowladda Soomaaliya, si ay u sheegato inay Shabaab ka aargudatay, ayada oo rumeysan muhiimadda Zakariye oo ahaa ku xigeenkii Godane iyo madaxii sirdoonka kooxdaas.
Ficilladii Kenya ee shalay waa astaan kale oo muujineysa siyaasadda jilicsan ee xukuumadda Nairobi, oo iminka ceeb dhexda ka taagaan.
Waxaa ammaan mudan Col. Cabaas Ibraahim Gurey iyo kooxdiisa oo waddaninmo adeegsaday si ay isaga caabiyaan damaca raqiiska ah ee Kenya, ayaga oo ku dhaartay in ku wareejinta Zakariye ee Kenya ay ka xigaan dagaal, taasi oo cabsi gelisay fuleyaashii ciidanka Kenya ee hareereeyay ciidanka qaranka Soomaaliya.
“Kenya waa dowlad, anagana waxaa nahay dowad, iskumana xad gudbin karno, haddii la maxkamadeynayo Zakariye, waxaa lagu maxkamadeynayaa dalkiisa” ayuu Col. Cabaas u yiri si geesinimo ah.
Dhammaanteen aan u hambalyeynayo Col. Cabaas iyo dhammaan ciidamada qaranka Soomaaliyeed.